႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွာ ေနရာယူထားၿပီး လူငယ္ေတြကို မဖယ္ေပးခ်င္တဲ့ လူအိုႀကီးေတြကို ႐ိုင္းရေတာ့မယ္လို႔ လြင္မိုးေျပာ » Myanmar Family Life
သူတို႔ကို ဂါရ၀မျပဳရင္ တလြဲလုပ္ၾကတယ္.. အမ်ားေကာင္းဖုိ႔ ဒီဘဲႀကီးေတြကို ရိုင္းရေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ လြင္မိုး
အားလံုးက စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကတဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု အကယ္ဒမီေပးပြဲႀကီးကေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးဆံုးသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ မေက်နပ္မႈေတြ အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ အားရေက်နပ္မႈေတြ ရွိေနခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။
ဒီႏွစ္ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆု အကယ္ဒမီေပးပြဲႀကီးကေတာ့ ပိုၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ရသင့္တဲ့ ဇာတ္ကားကို မရလို႔ မရသင့္တဲ့ဇာတ္ကားကို ရသြားလို႔ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းေပၚမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။
အခုလို ေ၀ဖန္မေက်နပ္တဲ့ လူေတြထဲမွာ ၀ါရင့္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဦးလြင္မိုးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္ဒမီဦးလြင္မိုးကလည္း သူရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကေန “တခြန္းတည္းေျပာမယ္” ၂၀၁၈..အကယ္ဒမီ ရွက္စရာအလြန္ေ ကာင္းသည္..လို႔ေတာင္ မွတ္ခ်က္ေရးသား ေဖာ္ျပသြားတဲ့ အျပင္….
ကိုယ့္ေလာကအေၾကာင္းေျပာရင္ မခံခ်င္ဘူး….မခံခ်င္ရောအာင္လည္း မလုပ္ႏုိင္.. လုပ္တာေတြကလည္းတလြဲ… ကၽြန္ေတာ္လည္းသိတာေပါ့..ပိုေတာင္သိေသး.. ဘယ္ကားဘယ္လိုေကာင္းတယ္ဆိုတာထက္ ဘာ့ေၾကာင့္ေကာင္းတာလည္း သူတို႔ေကာင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္လည္း ဘာနဲ႔လုပ္လုိက္လည္း အမ်ားႀကီးပါ
ကၽြန္ေတာ္သရုပ္ေတာင္ေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ့ ဇာတ္ကားဆိုတာမရွိဘူး.. ဘာ့ေၾကာင့္ မေကာင္းျဖစ္ရတာလည္းဆိုၿပီး အေၾကာင္းအေျဖရွာၿပီး ၾကည့္တတ္က်တယ္..
ပရိသတ္ႀကီးလည္း စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခု ရွိေနၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။
သူတို့ကို ဂါရဝမပြုရင် တလွဲလုပ်ကြတယ်.. အများကောင်းဖို့ ဒီဘဲကြီးတွေကို ရိုင်းရတော့မယ် ဆိုတဲ့ လွင်မိုး
အားလုံးက စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးကတော့ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ သို့သော်လည်း ပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဝေဖန်မှုတွေ မကျေနပ်မှုတွေ အခြားတစ်ဘက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ အားရကျေနပ်မှုတွေ ရှိနေခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။
ဒီနှစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးကတော့ ပိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ရသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကို မရလို့ မရသင့်တဲ့ဇာတ်ကားကို ရသွားလို့ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။
အခုလို ဝေဖန်မကျေနပ်တဲ့ လူတွေထဲမှာ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဦးလွင်မိုးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီဦးလွင်မိုးကလည်း သူရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ “တခွန်းတည်းပြောမယ်” ၂၀၁၈..အကယ်ဒမီ ရှက်စရာအလွန်ေ ကာင်းသည်..လို့တောင် မှတ်ချက်ရေးသား ဖော်ပြသွားတဲ့ အပြင်….
ကိုယ့်လောကအကြောင်းပြောရင် မခံချင်ဘူး….မခံချင်ရောအာင်လည်း မလုပ်နိုင်.. လုပ်တာတွေကလည်းတလွဲ… ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့..ပိုတောင်သိသေး.. ဘယ်ကားဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ဘာ့ကြောင့်ကောင်းတာလည်း သူတို့ကောင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လည်း ဘာနဲ့လုပ်လိုက်လည်း အများကြီးပါ
ကျွန်တော်သရုပ်တောင်တွေအတွက် မကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတာမရှိဘူး.. ဘာ့ကြောင့် မကောင်းဖြစ်ရတာလည်းဆိုပြီး အကြောင်းအဖြေရှာပြီး ကြည့်တတ်ကျတယ်..
အဒိကပြသနာက လူငယ်တွေနေရာမရတာ ဆုရွေးချယ်ရေးမှာရော.. အုပ်ချုပ်ရေးမှာရော.. ခေတ်မမှီတဲ့ လူတွေများပြီး နီးစပ်ရာနဲ့ပျော်နေကျတယ်..သိပ်လည်းဂရုမစိုဘူး.. မှားလည်းခပ်တည်တည်ပဲ.. မခင်ရင် မသိရင် သူတို့ကို ဂါရဝမပြုရင် တလွဲလုပ်တတ်ကျတယ်.. ကန်ရင်ပိုဆိုးရော.. ဂရုကိုမစိုက်တာ..အများကောင်းဖို့ ဒီဘဲကြီးတွေကို ရိုင်းရတော့မယ်…ဆိုပြီးတော့ မှတ်ချက်တစ်ခုကို ဦးလွင်းမိုးအကောင့်နဲ့ ပြောထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ရှိနေကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။